ကုမ္ပဏီ၏ Clients များအရည်အသွေးပြည့်မှီသော ၀န်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်‌ရန် ကုမ္ပဏီ၀န်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည်ပြည့်၀မှု၊ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၊ ကတိကဝတ်များနှင့်အညီလုပ်ကိုင်နိုင်မှုတို့အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ သို့ဖြစ်၍ HR အဖွဲ့အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏၀န်ထမ်းများ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ရန်၊ စွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်စေရန် နည်းဗျူဟာများချမှတ်ကာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် Clients ၏ စီမံကိန်းများအား သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတွင်း ပြီးမြောက်ရန်အတွက် ကန်ထရိုက်တာများ လိုအပ်ပါက ကုမ္ပဏီမှ ခေါ်ယူလုပ်ကိုင်စေခြင်းသည်လည်း တိုက်ရိုက် သော်လည်းကောင်း သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း တစ်နည်းအားဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးလျက် ရှိသည်။
၀န်ထမ်းများအပေါ်မျော်မှန်းချက်များနှင့် ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီမှ ရရှိနိုင်မည့်အခွင့်အ‌ရေးများကို ကုမ္ပဏီ၏ ၀န်ထမ်းလက်စွဲစာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ Alpha Power သည် Business Coalition For Gender Equality အဖွဲ့ ၀င်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှမှုရှိသည့် မတူကွဲပြားမှုများကို အလေးထားသော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖြစ်ရန်အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်တွင် Alpha Power ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် ၀န်ထမ်းပေါင်း ၅၆ ဦးရှိပြီး ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဝန်ထမ်းဦးရေ ၆၂ ဦးရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၀န်ထမ်းများအား ကျား၊မ မခွဲခြားဘဲ တန်းတူအခွင့်ရေးများ‌ရရှိအောင်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပြီး အင်ဂျင်နီယာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူလျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၀န်ထမ်းဦးရေ နှုတ်ထွက်နှုန်းသည် ၁၇%ခန့် ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်အကုန်တွင် ၁၂% ခန့်သာ ရှိခဲ့သည့်အတွက် ၀န်ထမ်းဦးရေနှုတ်ထွက်နှုန်းသည် တည်ငြိမ်မှုရှိသည်ဟု မှတ်ယူနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ထူးခြားချက်မှာ ၀န်ထမ်းတိုင်းနီးပါးသည် ၄င်းတို့၏မန်နေဂျာ (သို့) ကြီးကြပ်ရေးမှူးထံမှ မှတ်ချက်များ အသီးသီးရရှိခဲ့ကြသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီအားယုံကြည်မှုရှိအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အချက်အချာ ကျသော လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ၀န်ထမ်းများအား သင်တန်းပေးမှုသည် Alpha Power အတွက် ပဓာနကျသည်။ ၄င်းတို့၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာများ တိုးပွားနိုင်စေရန် ကုမ္ပဏီ၏ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများ၊ အင်ဂျင်နီယာများမှတဆင့် ၀န်ထမ်းတိုင်းအတွက် လုံလောက်သော သင်တန်းများရရှိနိုင်အောင်လည်း ဆောင်ရွက်ထားသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ၀န်ထမ်းတစ်ဦးသည် ပျမ်းမျှသင်တန်းချိန် နာရီ ၂၀ ခန့် ရရှိပြီး၊ ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း၏ ၉၄%မှ သင်တန်းများ အသီးသီးရရှိခဲ့ကြသည်။ အခြားသောသင်တန်းများအနေဖြင့် ၀န်ထမ်းများအတွက် Management 37% ၊ HR 19% နှင့် Engineering ၁၇% ပေးခဲ့သည်။
၀န်ထမ်းများအတွက် လုံခြုံသော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖန်တီးပေးခြင်းသည် Alpha Power ၏ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဘဏ္ဍာနှစ်၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ၄၄ ယောက်သော ၀န်ထမ်းများ သည် လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများရရှိခဲ့ကြသည်။ Alpha Power မှ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်များအတွင်း လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့် သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပါ။
Alpha Power ၏ လုပ်ငန်းများသည် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်အတွက် များစွာသောသက်ရောက်မှုများမ ရှိသော်လည်း ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများကို တက်အားသရွေ့ ‌လျှော့ချနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
စွမ်းအင်နှင့် GHG ထုတ်လွင့်မှု
Alpha Power ၏ လုပ်ငန်းခွင် လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် ‌အောက်ဖော်ပြပါ စွမ်းအင်များအား သုံးစွဲလျက်ရှိသည်။
ဒီဇယ်ဆီကို အစိုးရ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်လပ်သောအခါများတွင် ရန်ကုန်ရှိ ကုမ္ပဏီ ရုံးချုပ်နှင့် ရုံးခွဲများအား လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ပေးနိုင်ရန် ဓာတ်အားပေးစက်များမောင်းနှင်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဓာတ်ဆီကို ကုမ္ပဏီ၏ မော်တော်ယာဥ်များအတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဓာတ်ငွေ့ကို ဓာတ်ငွေ့ ဖြန့်ဖြူးပေးသော ပိုက်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ရံဖန်ရံခါ အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီမှ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်း စွမ်းအင် ၃၆၈,၄၄၇ kWh ခန့်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် ၁၉၂,၄၅၂ KWh အသီးသီး သုံးစွဲခဲ့သည်။ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာကိန်းကဏန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ GHG ထုတ်လွင့်မှုမှာ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တွင် ၁၁၀,၅၃၄ kg eq. CO2 နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၅၇,၇၃၅ kg eq. CO2 ခန့် ရှိခဲ့သည်။
Alpha Power ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်စေရန်, ကုမ္ပဏီမှ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အတွင်းတွင် ‌ရေ ၇၈၉ ကုဗမီတာ အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဝာာ၀န်ယူမှုရှိ‌သော ကော်ပိုရိတ် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် နိုင်ငံတော် အခွန်ငွေ ထမ်းဆောင်ရန် တာ၀န်ရှိသည့်အလျောက် Alpha Power မှ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် နိုင်ငံတော်သို့ မြန်မာ‌ငွေကျပ်သန်းပေါင်း ၃၈၀ ကျော် အခွန်ငွေပေးဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
Alpha Power သည် ကုမ္ပဏီ၏ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာမှ ဦး‌ဆောင်နေသော မြန်မာနိုင်ငံကြက်တောင် အဖွဲ့ချုပ်ကို တတ်အားသရွေ့ကူညီ ပံ့ပိုးလျက်ရှိသည်။ထို့အပြင် Alpha Power သည် အခြားသော ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်းများအတွက်လည်း ကူညီထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ Alpha Power မှ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ကျပ်သိန်း ၇,၈၃၉,၅၀၀ နှင့် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကျပ်သိန်း ၈,၇၀၀,၀၀၀ အား အားကစား၊ ပညာရေး နှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ ပရဟိတလှူဒါန်းငွေ၏ ၈၀%ကို မြန်မာနိုင်ငံကြက်တောင်အဖွဲ့ချုပ်သို့ လှူဒါန်းခဲ့သည်။